Saturday, 23 Feb, 2019 1:52 PM
११ फागुन, काठमाडौं । तेह्रथुमको इवामा बिसं २००८ फागुन ११ मा जन्मेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज (शनिबार) जन्मदिन हो। उनी आज ६८ औँ बर्षमा प्रवेश गरेका छन्। बिसं २०२८–२९ को झापा संघर्षमा सहभागी, १४ बर्ष जेलजीवन, ०६४ को संविधान सभा निर्वाचनबाहेक ०४८ यताका सबै निर्वाचनहरुमा झापाबाट विजयी, मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वको सरकार (२०५१–०५२) मा गृहमन्त्री, ०६३ मा उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्री, अनि २०७२–०७३ र अहिले गरी दुई पटक प्रधानमन्त्री बने। नेकपाको अध्यक्ष, नेकपा बन्नुअघि तत्कालिन एमालेको अध्यक्ष। यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक विगतबारे सायद धेरैलाई उतिसाह्रो जानकारी छैन। तेह्रथुममा जन्मेका ओली कसरी झापाली हुन पुगे, पक्राउ परेका झापा आन्दोलनकारीलाई तत्कालिन सत्ताले धमाधम हत्या गरिरहेका बेला मोहनचन्द्र अधिकारीसँगै रौतहटमा पक्राउ परेका ओली के कसरी बाँच्न सफल भए ? उनको जेल जीवन कसरी बित्यो र, १४ बर्ष जेलमा बिताएर उनी कसरी रिहा भए ? आफ्नो राजनीतिक जीवनको यिनै आरोह–अवरोहका बारेमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले हालसालै खुलाशा गरेका छन्। प्रस्तुत छ– प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले उपलब्ध गराएको सो कुराकानीको सम्पादित अंशः
♦ तेह्रथुममा तपाईं जन्मँदाको परिवेश कस्तो थियो ? तेह्रथुमबाट कसरी झापा सर्नु भयो ?
म बढ्दै, हुर्किंदै गएँ, स्कुल भर्ना भएँ। नजिकै थियो भन्नुपर्छ स्कूल। ४ बर्षको हुने बेलादेखि नै म स्कूल जान थालेँ। तर म एक्लै जाँदैनथेँ। घरका म भन्दा ठूला मान्छे वा साथीहरुले पु¥याइदिन्थे। त्यसबेलादेखि म पढ्न र घरका मसिना कामहरु गर्न थालेँ। हाम्रो परिवारमा त्यसबेला अरु कोही पनि छोराछोरी थिएनन्। म मात्रै थिएँ। ९आमा बितेपछि० हजुरआमा मात्र रहनु भयो। त्यस्तो अवस्थामा हजुरआमाले बढारेको देखेपछि मलाई पनि बढार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। मैले त्यही सिकेँ। उहाँले घर पोतेको देखेपछि घर पोत्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि पोत्न सिकेँ, घर लिपेँ। भाँडा माझेको देखेपछि मलाई पनि भाँडा माझ्न हुन्छ भन्ने भयो। गर्दागर्दै मैले हजुरआमाले गर्ने घरायसी सबै कामहरु सिकेँ।
♦ तेह्रथुमदेखि झापा सर्दाको सम्झना छ ?
♦ झापा आएपछि ?
झापा झरेपछि जग्गा किनेर बस्नु भयो कि सार्वजनिक जग्गा फँडानी गरेर ?
♦ तर तपाईंको स्कूल चालु थियो ?
पछि खोलाले जमीन लिएपछि हामीले अलिअलि किन्न सुरु ग¥यौँ। नत्र नकिन्नु नाफा थियो, लाभ थियो। जमीन नकिन्दा र स्कूलको जमीन ठेक्कामा कमाउँदा हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरै सुदृढ भएको थियो। त्यसबेला हामी धनी किसानको हैसियतमा थियौँ। पछि गरिब किसान र एकपटक त सुकुम्बासीकै स्थितिमा झर्नुप-यो।
♦ पञ्चायतको जगजगी चलेकोे बेला घरबार छोडेर राजनीतिको नशामा कसरी सल्किनु भयो ?
♦ अहिले पदमा रहँदा त तपाईंको विरोध गरिनु स्वाभाविक नै हो। त्यसबेला राजनीतिमा लाग्दा ठूलो जोखिम पनि उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा दिमागमा थियो ?
♦ तपाईं त्यसरी राजनीतिमा लागेको बुबा वा परिवारका अरुलाई थाहा थियो ?
♦ अनि, ‘यस्तोमा लाग्नु हुन्न’ भनेर बुबाले केही भन्नु भयो ?
‘सफल हुन सकौला ररु’ भनेर शंका व्यक्त गर्नुभयो। तर ‘नलाग्नु’ भन्नु भएन। मैले राजाको विरोध गरेको कुरामा धार्मिक प्रवृतिकी मेरो हजुर आमालाई अलि चित्त बुझेन। ‘राजाको विरोध गर्नु हुन्छ र ?’ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। मैले धर्म, राजाबारे थाहा पाउँदै गएपछि हजुरआमा र मबीच रामै्र बहस चल्यो। किनभने, हाम्रो घरमा धर्म र धर्मशास्त्रका प्रसंगको सन्दर्भमा बालबालिका बाहेक अरु सदस्यहरु जानकार थिए।
♦ हजुरआमा पढ्न पनि सक्नुहुन्थ्यो ?
♦ विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गिरफ्तार हुनुभयो र २०३० पछि त लगातार १४ बर्ष जेल बस्नु भयो। राजनीतिमा लाग्दा यति लामो काराबासमा बस्नु पर्ला भन्ने अनुमान थियो ?
♦ २०–२२ वर्षको उमेरमा आउँदा मृत्यु पनि रोज्न थालिसक्नु भएको थियो ?
♦ एक हिसावले भन्दा त्यो बेलाको राजनीति त मृत्यु रोजेजस्तै थियो नि ? होइन ।
♦ भन्नुको अर्थ, राजनीतिमा मृत्यु रोजाई नभएर कहिलेकाहीँ बाध्यता भएर आउँछ ?
मार्न भनेर लाँदै गर्दा र एकातिर गोली ठोक्नका लागि ‘स्मार्ट’ हटाइएको छ। तर एक जना अफिसरका मनमा ‘किन मार्ने यस्ता देशभक्तलाई ?’ भन्ने प-यो। उसले गाडीमा राखेर अर्कोतिर लगिदियो। जानी–बुझिकन अर्कोतिर लगिदयो। मैले उसलाई भनेँ, ‘सरकारले मार्नै खोजे पछि मार्छ, अहिले तपाईंहरुले एकछिन बचाएर के गर्नु, फेरि मार्छ। अहिले बचाए बापत तपाईंलाई अप्ठ्यारो हुन्छ।’
♦ त्यो अधिकारीको नाम थाहा छ ?
♦ त्यो बेला के पदमा हुनुहुन्थ्यो ?
♦ शुरुको वर्ष त्यति धेरै लामो जेल समय अथवा पञ्चायत झण्डै नजाँदासम्म जेल बस्नुपर्ला भन्ने सुरुमा लागेको थियो ?
♦ सेन्ट्रल जेल, भद्रपुर जेल, कास्कीजेल र स्याङ्गजा जेलस यी जेलबाट तपाईंको राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो पार्टीसँग ?
‘मेरो स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हेर्दिनु प-यो’ भनेँ, गुहारेँ। सर्वोच्च अदालतले मलाई झिकायो, ‘छोड्नू’ भन्ने आदेश दियो– २०४१ सालमा। ‘छोड्नू’ भन्ने आदेश दिएपछि मलाई हतकडी नलगाई ल्याएको थियो। ‘छोड्नू’ भन्ने आदेश दिँदा म कठघरामै थिएँ। त्यहीँ हतकडी लिएर प्रहरी आयो। न्यायाधीश बेञ्चमा बसेको छ, हेरिराखेको छ। मैले सोधेँ, ‘श्रीमान्, यो के हो ?’
श्रीमान्ले उतापट्टि हेरे, मुन्टो फर्काए। हेरेको हे-यै जुरुक्क उठे, उतैबाट आफ्नो कोठामा गए। मलाई हत्कडी लगाएर घिस्याएर लग्यो। पहिले हतकडी नलगाइ ल्याएको थियो, जबकी ‘थुन्नू’ भन्ने सिडिओको आदेश कायम थियो। त्यसबेला हत्कडी नलगाई ल्याएको थियो, अदालतसम्म। अदालतले ‘छोड्नू’ भन्ने आदेश दिएपछि हतकडी लगायो।
अर्कोपल्ट मैले फेरि मुद्दा हालेँ, ‘यो त अचाक्ली भयो’ भने। अर्कोपल्ट पनि त्यस्तै भयो। ‘छोड्नू’ भन्ने आदेश भयो। अनि पुलिसले मुन्टाएर फेरि पक्रियो। त्यसपछि हनुमानढोका लग्यो र थुन्यो। अनि, मलाई फेरि त्यसैगरी जेल पठाइयो। यस प्रकारले १४ वर्ष बिते। ‘राजा वीरेन्द्रले कुराकानी गर्न बोलाए, कैदीले राजालाई भेट्नु राम्रो हुन्न भनेँ ।’
♦ ०४४ सालमा छोड्ने बेलामा चाहिँ अदालतको आदेशले छोड्यो कि के भनेर छोड्यो ?
मैले भनेँ, ‘राजाले एउटा कैदीलाई भेट्नु वाञ्छनीय हुँदैन। राजाले जेलमा बसिराखेको कैदीलाई किन भेट्नेरु त्यो राम्रो हुँदैन। म छुटेपछि मौसुफलाई भेट्ने विचार गरौँला। त्यो इच्छा गर्छु। अहिले मैले भेट्नु वाञ्छनीय हुँदैन। यसो गर्दा अनावश्यक तिक्तता हुन सक्छ। मौसुफले केही कुरा भनिबक्सेला, मलाई मान्य नहोला। किनभने, म धेरै वर्ष अकारण थुनिसकेको छु। र, मसँग एक प्रकारको ‘इरिटेशन’ छ। त्यो ‘इरिटेशन’ भेटमा व्यक्त होला। त्यसकारण छुट्न भन्दा अगाडि राम्रो नहोला। त्यसमा पनि महाराजधिराजले कैदीलाई भेट्नु म त्यति राम्रो ठान्दिन।’
♦ लिखित पठाउनु भयो कि मौखिक ?
राजा र पञ्चायती व्यवस्था मान्नु पर्ने भन्ने कुराले मलाई अत्यन्त चिड भयो र ‘अब कुरा गर्दिनँ’ भनेँ। ‘अब कुरा नगरौँ, गल्ती व्यवस्थाले महशुस गर्छ कि गर्दैन, गल्ती त ग¥यो, अुनचित ढंगले थुन्यो, यो कुरा महशुस गर्छ कि गर्दैनरु’ मेरो यो प्रश्नले उनीहरुमा पनि चिड पैदा हुने कुरा भयो। मैले यो कुरा वार्ता बन्द गर्नका लागि भनेको थिएँ। १८ मंसिर ९०४३० मा राधाकृष्ण मैनाली बाहिर लगिनुभयो।
मैले सोधेँ, ‘तपाईंलाई किन छोडे ? कसरी छोडे ? उनीहरुका सर्तहरु मान्नुभयो तपाईंले ?’
मैले भनेँ, ‘हो, संविधान मान्नु नागरिकको कर्तव्य हो। तर यो संविधानभित्र के छरु निरंकुशतन्त्र छ, पञ्चायत छ, यस्तै–यस्तै कुरा छ। त्यसकारण यो घुमाउरो बाटो हो, संविधान मान्छु भन्नु निरंकुशतन्त्र मान्छु भन्नु हो, पञ्चायत मान्छु भन्नु हो। यस्ता कुरा संविधानको त्यही डालोमा छ, त्यही डोकोमा छ। त्यसकारण संविधान मान्छु भनेपछि त्यसभित्रको एउटा कुरा मान्दिन भन्ने हुँदैन। त्यसकारण म ‘संविधान मान्दिन’ भन्ने, तर ‘शब्द मान्छु’ भन्ने कुरा आवश्यकता म देख्दिन। हाम्रो असहमति संविधान भन्ने पुस्तकसँग होइन। ‘निरङ्कुश राजतन्त्र हुनुहुँदैन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुनुहुँदैन’ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यदि यस संविधानबाट निरङ्कुश राजतन्त्र हटाइनेछ, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हटाइने छ भन्ने कागज सरकारले पनि गर्छ भने यस्तो अवस्थामा ‘म पनि संविधान मान्छु’ भनेर त्यो कागजको वरतिर लेख्छु र सही गर्छु।’
उनीहरुले सोधे, ‘के गर्नु हुन्छ त ? जेलमा जानुहुन्छ त ?’
♦ के भनेर तपाईंलाई छोडे ?
राती ९विहान हुन लागेको थियो० नै ‘एकछिन गेटमा बोलाएको छ’ भने। म ‘स्लिपिङ ड्रेस’ मा थिएँ। भर्खर उठेको थिएँ। व्यायाम गर्दै थिएँ। ‘गेटमा बोलाएको छ’ भनेपछि गएँ, त्यही ड्रेसमा।
मैले भनेँ, ‘के को तमासा होरु म चौध वर्ष जेल बसिसकेँ। जेसुकै आएपनि म भाग्ने मान्छे होइन। यति धेरै तमासा गर्नुपर्दैन, जहाँ लैजाने हो, लैजाऊ।’
उनीहरुले गाडी ‘ड्राइभ’ गरे। कहाँ लगेका हुन्, थाहा भएन। एकैपटक बालुवाटार ल्याए। बालुवाटारमा ल्याएर, यो बीचको सानो कोठा छ, निलगिरी कोठा– त्यो कोठामा मलाई लगे। मरिचमानजी ९तत्कालिन प्रधानमन्त्री० बाहिर कार्पेटबाट भित्र पस्ने ठाउँनिर उभिनु भएको रहेछ। उहाँले मलाई कहिल्यै देख्नु भएको थिएन। मैले त फोटोमा कतै देखेको थिएँ, त्यसैले चिन्न सजिलो भयो। अचानक गेटमा भेट भयो।
त्यो लामो कुराकानीको अन्त्यतिर उहाँले के भन्नु भयो भने, ‘तपाईं एउटा इमान्दार मान्छे हो, देशभक्त मान्छे हो। अडान भएको मान्छे हो। तपाईं छुट्न नमानेको मान्छे हो। तपाईंलाई मन्त्री बनाउने अनेक ‘अफर’ आए। तपाईं छुट्न मान्नु भएन। यो साधारण कुरा होइन। यी सबै कुरालाई महाराजधिराजले नजिकैबाट हेरिबक्सिएको छ। तपाईंले महाराजधिराजलाई सहयोग गर्नुप-यो।’
मैले भनेँ, ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईंले भनेको कुरा मैले राम्ररी बुझिन। म देशप्रति समर्पित छु, जनताप्रति समर्पित छु। इमानदारीताका साथ काम गर्छु। देशको भलाईको निम्ति काम गर्छु। भलाईको निम्ति म ज्यान दिन तयार छु। एउटा राष्ट्रप्रमुखलाई यसबाट सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन ? पुग्छ भने म गरिराखेको छु। यो कुरा तपाईंहरुले बुझ्नु–नबुझ्नु बेग्लै कुरा हो। यत्तिले पुग्दैन, यसभन्दा पृथक केही छ भने त्यो त म गर्न सक्दिन।’
मैले यो पनि भनेँ, ‘राष्ट्रप्रमुखको हित देश र जनतासँग जोडिएको हुनुपर्छ। देश र जनताको हितका निम्ति काम गर्दा राष्ट्र प्रमुखलाई सहयोग पुग्नु पर्छ। यसमा खुसी मान्नु पर्छ। तपाईंले जे भन्नुभयो, त्यो महाराजधिराजको कुरा हो कि तपाईंको आफ्नो कुरा होरु मबाट महाराजधिराजले कस्तो सहयोग खोजेको होरु मलाई त महाराजधिराजको जस्तो लागेन, तपाईंको कुरा जस्तो लाग्यो। महाराजाधिराजलाई खुसी पार्न तपाईंले यस्ता कुरा मसँग गर्नु भएको छ।’
♦ त्यसैलाई अर्को कागज गर्दिएको थियो भन्देला भनेर हो कि !
भन्दिएला। सही गर्न छोडिदिने भनेपछि मरिचमानले त्यही भन्नुभयो, ‘कागज गर्नुहुन्न भन्ने थाहा भइसकेको छ। हामी त्यता जाँदैनौँ। तपाईंलाई छोडिदिने भन्ने महाराजधिराजको हुकुम पनि छ, इच्छा पनि छ। अहिले तपाईंलाई जेल पठाइन्छ। अञ्चलाधीस ९धर्मबहादुर थापा० ले तपाईंलाई कुनै बेला बोलाउनु हुन्छ। त्यहाँबाट छोड्नु हुन्छ।’
अनि धर्मबहादुर आए, ‘किन चाहियो मरिचमानरु महाराजधिराजको इच्छा छ, हुकुम छ।’
मैले भनेँ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेको छ भने अञ्चलाधीस चाहियो किन ?’
‘होइन, रित पु-याउनलाई।’
‘रित पु-याउँदा फेरि कहीँ गडबड नहोस्, झमेला नहोस्’
त्यो कुरालाई मैले कसरी बुझेँ भने, ‘यिनीहरुले धर्मबहादुर थापाका केही नयाँ कुरा गर्न निकाल्न सक्छन् र नमिल्न सक्छन्। कसैलाई नभन्नु भनेको कुरा मिलेन भने ‘महाराजधिराजको हुकुम र इच्छा’ भनिसकेको छ, त्यो कुरा के भयो तरु भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले कसैलाई नभन्नुस् भनेको होला।’
मैले सोधेँ, ‘हल्लाखल्ला भयो भने के हुन्छ ?’
त्यहाँ (झापा) गएपछि त्यहाँको अञ्चालाधीशलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। म कहाँ जाने ? अलिअलि त हल्लाखल्ला त हुने नै भयो नि छुटेपछि– परिवार, नातागोता, आफन्त, राजनीतिमा। म अहिले नै भन्छु, तपाईंहरुको खटनपटन हो भने त (जेल) भित्रै राख्नुस् है। छुट्न पाएको छैन, फेरि तपाईंहको खटनपटन त म मान्दिन। अञ्चालाधीशको आदेशमा हिड्ने भए म किन छुटिरहनु पर्दथ्यो ?’
मैले भनेँ, ‘तपाईंले किन छिटै जान भनेको त ?’
उनले भने, ‘त्यसरी भनेको होइन मैले। परिवार यत्रो वर्षदेखि अलग भइराखेको छ।’
‘ए, मेरो परिवार, आफन्त यतिविधि, यति लामो समयदेखि भेटघाट भएको छैन भन्ने चिन्ता तपाईंहरुलाईरु’ मैले भनेँ, ‘परिवारसँग छिट्टै भेट गराऊँ भन्ने तपाईंको कुरा राम्रो लाग्यो।’
♦ तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
♦ लिन आउने पनि छैन ?
♦ तपाईं बटुवा–तमासे जस्तो बन्नु भयो ?
अँ। यताउति हेरेँ। अनि, लुखर–लुखर घण्टाघर हेर्नतिर लागेँ। वरतिर आएर घण्टाघर हेर्न, त्रिचन्द्र हेर्नतिर लागेँ। किनभने, त्यो ९त्रिचन्द्र र घण्टाघर० म २७ सालमा एकपटक आएर हेरेको थिएँ, चस्स दुई दिन। फेरि आएर हेरेँ। अनि, अब कता जाने, के गर्ने भन्ने भयो।
मेरो राम्रै दोस्ती रुपचन्द्र विष्ट (थाहा अभियानका संस्थापक, मकवानपुरका पूर्व रापंस) सँग पनि थियो। सुनकोशी छापाखानामा एउटा बस्ने अड्डा छँदै थियो। प्रकाश काफ्ले, मानव अधिकारकर्मीहरुको त्यहाँ कालिमाटीमा माथितिर एउटा डेरा थियो। लालबहादुर खाती ९स्व गायक० को घर थियो। लालबहादुर खातीको परिवार तल बस्थे। माथि चाहिँ मानव अधिकारकर्मीहरु बस्थे। त्यसपछि हामी भिमफालतिर स¥यौँ। जे होस् जेल बसाइँ त्यसरी टुङ्गियो।
♦ ठीक ठाउँमा ल्याएर छोडेछ, होइन त ?
♦ तपाईं जेलभित्र रहेका बेला ‘पार्टीप्रति गद्दारी ग-यो, बेइमानी ग-यो’ भन्ने खालका कुनै अभियोग लगाएको थियो ?
जेल परेका बेला म पार्टी सदस्यताबाट निस्कासित थिएँ। झापा आन्दोलन सुरु गर्ने कुराको अगुवाई गरियो। आज ज–जसले जे–जे श्रेय लिन खोज्छन्, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। तर अलिकति पछाडि त्यसलाई ‘ओभरटेक’ गर्ने साथीहरु थुप्रै निस्किए। नक्सलपन्थीहरुको त्यसमा प्रभाव प-यो, जसले गर्दा मसँग थुप्रै मतभेद पैदा भए। ती मतभेदले परिस्थिति अलिक तनावपूर्ण भयो। नक्सलपन्थीको लाइनमा हिडेन भने नक्सलपन्थीको समेत आक्रोश, त्यो आक्रोशमा हाम्रा साथीहरुको महत्वाकांक्षा मिसिएर एउटा षडयन्त्र मविरुद्ध पार्टीबाट भयो। म पार्टी प्रमुख थिएँ। पार्टी प्रमुखबाट, कमिटीबाट र सदस्यताबाट पनि हटाउने खेल भयो।
♦ कति सालमा ?
♦ तपाईं पक्राउ पर्नुभन्दा पहिलेको कुरा हो यो ?
♦ तपाईं पार्टीसँग कति सालमा जोडिनु भयो, जेल बसेका बेला ?
म पार्टीको लगातार सम्पर्कमा नै थिएँ। म साथीहरुलाई भन्थेँ, ‘तिमीहरु जसले मलाई निकाल्यौ, तिमीहरु भर्खर सिक्दैछौ, बुझेका छैनौ। त्यसकारण आवेशमा, उत्तेजनामा छौ। आन्दोलन भनेको आवेश, उत्तेजना होइन। तिमीहरु दुई–चार जनालाई हेरेर कुरा गर्छौ। तिमीहरु अहिले अगाडिको थाल हेरेर कुरा गर्छौ, म भविष्य हेरेर कुरा गर्छु– के हुन्छ, के हुने वाला छरु त्यसकारण मलाई तिमीहरुले पार्टीबाट निस्कासन गर्ने जुन फैसला ग¥यौ, त्यो धोका हो, भ्रम हो। म पार्टीबाट निस्कासित हुन्न। तिमीहरुले सदस्यताबाट हटायौ। तर म पार्टीको प्रमुख नै छु। यथार्थमा म नै पार्टीको प्रमुख हो। किनभने पदको हिसाबले एकछिनलाई कसैले कसैलाई हटायो होला। तर यथार्थमा जसले विचारले त्यस आन्दोलनको सिर्जना ग¥यो, त्यस आन्दोलनलाई ठीक बाटोमा लानुपर्छ भन्यो, त्यो नै प्रमुख हो।’
♦ यदि कुनै कारणले तपाईंलाई ‘तल–माथि’ भएको भए के.पी. ओलीका बारेमा अर्कै इतिहास लेखिन सक्ने थियो होला। होइन ?
♦ एकजना ‘क्रान्तिकारी राजवन्दी’ वा ‘क्रान्तिकारी राजनेता’ नभनिकन...अर्कै...?
♦ कहिलेकाहीँ जेलभित्र बस्दा त्यस्तो सम्झना हुन्थ्यो ?
♦ अहिले कि त्यसबेला ?
त्यसबेला। मेरो बानी जस्तो भन्नुस्, मान्छेको एउटा प्रवृति हो। तपाईं जस्तो भन्नुस्, सुन्दर ठूलो फोटो राख्यो भने तपाईंलाई आनन्द लाग्छ। तपाईं हुनुहुन्छ र तपाईंलाई आनन्द लाग्छ। तर तपाईं कति सय वर्ष हुनुहुन्छ तरु सय वर्षको आसपास हुनुहोला। अर्को सय वर्ष त तपाईं हुनुहुन्न। तपाईंको छोराले चिन्ला– बाबुको फोटो। छोराले नातीलाई भन्ला, ‘हजुरबाको फोटो।’ त्यस पछिकाले चिन्दा पनि चिन्दैनन्।
फोटो अथवा समय यस्तो निर्मम हुन्छ, कागजमा बनाउनुस्, पुरानो हुन्छ। ताम्रपत्रमा बनाउनुस्, त्यसलाई पनि समयले खान्छ। फलाममा बनाउनुस्, त्यसलाई पनि समयले खान्छ। र, कुनै हिसाबले कसैको शालिक बनाएर को अमर भएको छ ? शालिक त धेरै बने नि१ को अमर बन्यो ?
मानव सचेत प्राणी भएकोले आफ्नो बारेमा प्रिय कुरा भन्न रुचाउने उसको स्वभावै हो। ‘नराम्रा कुरा सुन्न नपाए हुन्थ्यो आफ्नो बारेमा’ भन्ने चाहन्छ मान्छे। तर त्यसको आयु चाहिँ कति छ त ? त्यस प्रबृतिले थेग्ने युग, समय वा कालखण्ड कति हो ? कालखण्डमा हामीले कर्तव्य गर्ने हो। राम्रो काम गर्ने हो मानिसहरुका लागि, धर्तीका लागि, सन्ततीका लागि।
‘सत्य त्यो मात्रै हो’, ‘राम्रो काम त्यो मात्रै हो’ र ‘मलामी धेरै भए हुन्थ्यो’ भन्छन्, केही फरक पर्दैन। मान्छेले सम्मानले फूल चढाउन् कि जुत्ताले हानुन्, के फरक गइसकेपछिरु मैले राम्रो काम गर्न प्रेरित नगर्न खोजेको होइन। तर राम्रो काम गर्दा यस्ता कुराहरुको पनि लोभ छोडिदिनु पर्छ। लोभलेपनि हो मान्छेलाई ढोगी बनाउने। मान्छेलाई छद्मभेषी बनाउने। प्रसंशा रुचाएपछि आफ्ना कमी–कमजोरी भन्न भएन, कमी लुकाउनु प¥योर्, अनि नराम्रा कुरा सुन्न नरुचाउने भएपछि, प्रशंसामात्रै रुचाउने भएपछि अलिकति देखावटी कुरा गर्नुप¥यो।
एउटा चलन हुन्छ, मान्छे मरेका ठाउँमा जाँदा अलिकति नजिक आइसकेपछि ‘वाँ...हाँ...’ गरेर रुने। रुने नै हुन्छ। यहाँ काठमाडौँमा त झन् चलनै छ। रुनै पर्छ त्यो चलन। म त्यस पक्षमा छैन। रुन आयो भने रुनु, नआए नरुनु। रुन आयो भने रुनु स्वभाविक नै हो। आरामले रोए हुन्छ। रुन आएन भने अभिनय नगर्नू। राम्रो काम गर्न सकिन्छ भने राम्रो काम गर्नू। प्रेमभाव छ भने प्रकट गर्नू। प्रकट भइहाल्छ। बनावटी...। त्यसका लागि त नाटक मञ्चन भइहाल्छन् नि। कलाकार छन्, फिल्म छन्। अनि वास्तविक जीवनमा पनि फिल्म नै खेल्ने ? वास्तविक जीवनमा पनि नाटक नै रच्ने ? म त्यस पक्षमा छैन।
♦ ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीकोे नेतृत्वमा अत्पमतको सरकार बन्यो र त्यो सरकारको गृहमन्त्री बन्ने अवसर यहाँले प्राप्त गर्नु भयो। अहिले जुन कुरा ग¥यौँ नि, त्यो बेलाको ‘रिल’ एकपटक घुम्यो ?
म धेरै अतितमुखी हुन्न। अतित त वेथिति भइसक्यो। आगत कस्तो बनाउने र कसरी स्वागत गर्ने ? वर्तमानलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा हो। यद्यपी, अतितप्रति बेखबर भएर कसैले भन्छ नि, ‘दुख पाएको अतित बिर्सियो।’ दुख पाएको अतितमा पनि धेरै अल्झिनु हुदैन। सुख पाएको अतितमा पनि धेरै अल्झिनु हुँदैन। ‘म संभ्रान्त परिवारको थिएँ’, त्यो दम्भ पनि गर्नु हुँदैन। ‘मैले दुख पाएको थिए’, यस्तो हिनताबोध पनि राख्नु हुँदैन। अतितमा जे भएको भएपनि ‘मैले दुख पाएको थिएँ’ भनेपनि त्यो इतिहास हो। त्यसलाई सम्झिनु पर्छ। तर हिनतावोधबाट ग्रसित हुनु हुँदैन। र, इतिहासको वा विगतको अनुकूलता केही सम्झिएर पनि दुखित हुनुहुँदैन। त्यो पनि अर्को दुखित हुने मेलो हो। त्यसकारण हामीले एउटा परिस्कृत मानव हुने हो, सभ्य परिस्कृत मानव हुने हो– जो नैतिकवान छ, जो समाजप्रति र यस धर्तीप्रति समर्पित छ।
♦ नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीलाई कसरी स्मरण गरुन् भन्ने चाहनु हुन्छ ?
मेरो काम नेपाली जनतालाई सुख दिने हो। नेपाली जनताले मेरो स्मरण गरेर समय खेर फाल्ने भन्दा आफ्ना सन्तानको स्याहार–सम्भार गरुन् र देश बनाउन् भन्ने चाहन्छु। मेरो स्मरणमा समय किन खेर फाल्ने ?
♦ तपार्ईं जुन शिखरमा बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं आफैले भन्नुपर्दा के चाहिँ स्मरणीय लाग्छ ?
म जुन काममा लागेँ, त्यसमा म निष्ठासाथ लागेँ। सांसद हुँदा सांसदको हिसाबले, गृहमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रीको हिसाबले देशमा शान्ति सुरक्षा कामय गर्नु मेरो कर्तव्य थियो। मैले त्यसलाई सफलताका साथ सम्पन्न गराएँ। पराराष्ट्रमन्त्री हुँदा मैले परराष्ट्र मन्त्रीको हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरु सफलतापूर्वक गरेँ। त्यसबेला भुटानी शरणार्थीहरुको समस्या समाधान गर्नु थियो। त्यो मैले सफलतापूर्वक अगाडि बढाएँ। र, त्यो आज करिब–करिब समाधान भइसक्यो। मान्छेले भन्ने गर्छन्, प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रवादी अडान देखायो, यो ग-यो, त्यो ग-यो। भारत विरोधी अडान लियो। मैले भारत विरोधी अडान लिएकै होइन, नेपालको पक्षमा अडान मात्र लिएको हो।
♦ अर्थात् एक जना नेपाली नागरिकले जे कर्तव्य गर्नु पथ्र्यो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले जे काम गर्नु पथ्र्यो, त्यही काम गर्नु भयो ?
♦ एक शब्दमा भन्नुपर्दा ओली सचेततापूर्वक भित्रैबाट सोचेर काम गर्छन् भन्नु सही हुन्छ ?
हो, के।पी। ओलीले घमण्ड गर्दैन् डर्फी हुँदैन। के गर्नुपर्छ, के।पी। ओलीलाई राम्ररी थाहा छ।
♦ तर मानिसहरुले तपाईंका बारेमा धेरै कुरा भन्छन्। थाहा छ ?